के एक मुख्य आइडिया भनेको छ र यसलाई कसरी खोज्न सकिन्छ
हामी सबैले हाम्रो पढ्ने समझ परीक्षणमा मुख्य विचार प्रश्नहरू देखेका छौं, तर कहिलेकाहीँ, यी प्रश्नहरू जवाफ दिन निकै गाह्रो हुन्छन्, विशेषगरि यदि तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईलाई थाहा छ कि मुख्य विचार वास्तवमा के हो। तर पाठको अनुच्छेद वा लामो पासराजको मुख्य विचार पत्ता लगाउनुहोस् , एक भनाई संग, लेखकको उद्देश्य खोज्न वा सन्दर्भमा शब्दावली शब्दहरू बुझ्न , एक मास्टर पढ्न को लागी पढ्ने कुञ्जी को एक हो।
यसो गर्दा तपाईंको अर्को मानकीकृत परीक्षणको पढ्ने बुझन खण्डमा सफल हुन मद्दत गर्नेछ। मुख्य विचार के हो भनेर बुझ्न र केही सरल चरणहरू पछ्याउन तपाईंलाई यो पहिचान गर्न सिक्न मद्दत गर्नेछ।
मुख्य आइडिया के हो ?
अनुच्छेदको मुख्य विचार अनुगमनको बिन्दु हो, खनिज सबै विवरणहरू। यो मुख्य बिन्दु वा अवधारणा हो जुन लेखक विषयको बारेमा पाठकहरूलाई कुराकानी गर्न चाहन्छ। यसैले, एक अनुच्छेदमा, जब मुख्य विचार प्रत्यक्ष रूपमा भनिएको छ, यो विषय वाक्य भनिन्छ भन्ने कुरामा व्यक्त गरिएको छ। यसले अनुच्छेद बारेमा के बारे विस्तृत जानकारी दिन्छ र अनुच्छेदमा विवरण द्वारा समर्थित छ। बहु अनुच्छेद लेखमा, मुख्य विचार थेसिस बयानमा व्यक्त गरिएको छ।
मुख्य विचार भनेको के तपाईंले कसैलाई भन्नु भएको छ जब तिनीहरूले तपाईले पछिल्लो हप्ताको अन्तमा सोध्नुभयो। तपाईंले केहि भन्न सक्नुहुनेछ, "म मॉल गएँ," भन्नुको सट्टा, "म मेरो कारमा पुग्यो र मल्ल फर्केर गयो।
मैले मुख्य प्रवेशको नजिकै पार्किंग स्पेस पाए पछि, म भित्र गए र Starbucks मा एक कफी पाउनुभयो। त्यसपछि, म समुद्र तट जान्छ अर्को सप्ताहांतमा लग्न को लागी नयाँ जुत्ता किन्न खोज्दै धेरै जूता पसलहरूमा गए। मैले तिनीहरूलाई एल्डोमा भेटें, तर त्यसपछि मैले अर्को घण्टाको लागि शॉर्ट्समा प्रयास गरे किनकी मैले गरेको महसुस गरेको सबै सबै सानो थिए। "
मुख्य विचार छोटो छ, तर सबै निस्पष्ट सारांश। यसले सामान्य तरिकाको बारेमा सबै अनुच्छेद वार्ताहरू समावेश गर्दछ, तर विशेष समावेश गर्दैन।
जब लेखकले मुख्य विचारलाई सीधा स्थितिमा राख्दैन, यो अझै पनि लागू हुन्छ , र एक मुख्य मुख्य विचार भनिन्छ। यो आवश्यक छ कि पाठक सामग्री मा नजानुहोस् - विशेष शब्दहरू, वाक्यहरू, प्रयोग गरिएका तस्बिरहरू र दोहोरो - लेखकहरूलाई संवाद के गर्ने कटौती गर्न। यसले पाठकको भागमा केहि प्रयासहरू लिन सक्छ।
तपाईले पढ्नु भएको कुरा बुझ्नको लागि मुख्य विचार पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण छ। यसले जानकारीलाई अर्थ बनाउन र प्रासंगिकतामा मद्दत गर्दछ, र सामग्री सम्झनको लागि ढाँचा प्रदान गर्दछ।
विषय पहिचान गर्नुहोस्
पासोमा पूर्ण रूपमार्फत पढ्नुहोस्, त्यसपछि विषय पहिचान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। कसको वा अनुच्छेद हो?
राम्रो तरिकाले पारित पढ्ने पछि, यसलाई एक वाक्यमा तपाईंको आफ्नै शब्दमा संक्षेप गर्नुहोस् जुन अनुच्छेदबाट हरेक विचारको गस्ट समावेश गर्दछ। यो गर्न को लागी एक राम्रो तरीका छ जुन तपाईंको बारेमा जुन कुरा बारे कसैलाई बताउन केवल दस शब्दहरू प्रकट गर्दछ।
पारित को पहिलो र अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस्
लेखकहरूले प्राय: मुख्य विचार वा अनुच्छेद वा लेखको पहिलो वा अन्तिम वाक्यमा वा नजिक राख्दछ।
निर्धारण गर्नुहोस् कि यी वाक्यहरूको कुनै पनि मुख्य विचार खिच्नुहोस् कि। कहिलेकाँही, तथापि, लेखकले कुन वाक्यलाई दोस्रो वाक्यमा उल्टो संक्रमण भनिन्छ भनिन्छ - तथापि , यसको विपरीत , तथापि , यसको वाहेक , आदि - यो संकेत गर्दछ कि दोस्रो वाक्य मुख्य विचार हो। यदि तपाइँ यी शब्दहरू मध्ये एक को हुनुहुन्छ जुन पहिलो वाक्यलाई तिरस्कार वा योग्य बनाउँछ, यो एक सुराग हो कि दोस्रो वाक्य मुख्य विचार हो।
विचारहरूको दोहोर्याएर हेर्नुहोस्
यदि तपाइँ अनुच्छेद मार्फत पढ्नु हुन्छ र तपाईलाई थाहा छैन कि कसरी संक्षेप गर्न कसरी हुन्छ किनभने त्यहाँ धेरै जानकारी छ, बारम्बार शब्दहरू, वाक्यांशहरू, विचारहरू वा यस्तै विचारहरू हेर्न सुरु गर्नुहोस्। यो उदाहरण अनुच्छेद पढ्नुहोस्:
एक नयाँ सुनुवाई यन्त्रले डिस्पोजेबल आवाज-प्रसोधन भाग को स्थानमा राख्न चुम्बक प्रयोग गर्दछ। अन्य एड्स जस्तै, यसलाई ध्वनिमा ध्वनि बदल्छ। तर यो अनूठा छ कि यसले भाइरसहरू सिधै चुम्बकमा र त्यसपछि आन्तरिक कानमा प्रसारण गर्न सक्छ। यसले एक स्पष्ट आवाज पैदा गर्दछ। नयाँ यन्त्रले सबै सुन्ने गरी बिछाउने व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्दैन - केवल ती व्यक्तिहरू संक्रमण वा मध्य मध्यमा केही अन्य समस्याको कारण सुनेको हानि। यो सम्भवतया सबै समस्याहरूको 20 प्रतिशत भन्दा बढी मद्दत गर्न मद्दत गर्नेछ। ती व्यक्ति जसले निरन्तर कान संक्रमण भएका छन्, तथापि, नयाँ यन्त्रको साथमा राहत पाउन र पुनःस्थापना गर्नु पर्छ।
यो अनुच्छेद निरंतर दोहोरो के हो? नयाँ सुनुवाई यन्त्र। यस विचारको बारेमा के हो? नयाँ सुनवाई यन्त्र अब केही श्रवण-बिशेष व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध छ। अनि त्यहाँ मुख्य विचार छ।
मुख्य आइडिया गल्तीबाट बचाउनुहोस्
जवाफ सेट को सेट बाट एक मुख्य विचार छनौट आफ्नो मा एक मुख्य विचार को रचना भन्दा फरक छ। धेरै छनौट परीक्षणका लेखकहरू प्राय: कठोर हुन्छन् र तपाईंलाई विचलित प्रश्नहरू दिनेछन् जुन वास्तविक उत्तरको जस्तै आवाज। पारित पढेर राम्रो तरिकालेर्फत, आफ्नो कुशलताहरू प्रयोग गरेर र तपाईंको आफ्नै मुख्य विचारलाई पहिचान गरी, तथापि, तपाईं यी3साधारण गल्तीहरू गर्नबाट जोगिन सक्नु हुन्छ - 1) दायरामा निकै गाढाको जवाफ छान्नुहोस्; 2) जवाफ एकदम व्यापक छान्नुहोस्; 3) वा जवाफ छ कि जटिल छ तर मुख्य विचारको विपरीत।
मुख्य विचार पत्ता लगाउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ माथिको उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोला र अभ्यास गर्नुहुनेछ, तपाई मौखिक वा पढाइएका मानकहरूको सेकेन्डमा तपाईले चाहानु भएको स्कोरको लागि राम्रो तरिकाले हुनेछ।
संसाधनहरू र थप पढाइ
> कसरी निर्धारण गर्नुहोस् एक मुख्य मुख्य विचार
> कसरी लागू गरिएको मुख्य आइडिया खोज्नुहोस्
> मुख्य विचार अभ्यास खोज्दै
> अनुच्छेदमा मुख्य विचारहरू खोज्दै, http://english.glendale.cc.ca.us/topic.html
> मुख्य विचार , कोलम्बिया कलेज, को खोज गर्दै , http://www.ccis.edu/offices/academicresources/writingcenter/studyskills/textbookreadingstrategies/findingthemainidea.aspx
लिसा मार्डर द्वारा अपडेट गरिएको
कार्यपत्र 1 उत्तर कुञ्जी: लेखकको टोन
15 यो जटिल जटिल बुबा-पुत्र सम्बन्धको अन्वेषण गर्ने उद्धरण
Nirmanakaya - एक तीन बहादुर निकायहरु मध्ये एक
Tullus Hostilius को जीवनी
आइस क्यूबहरू बनाउन
परिभाषा र ब्याक स्लैगको उदाहरण
ईदियम्स र भाव - आओ
Rosemont कलेज प्रवेश
तपाईंको प्रवेश साक्षात्कार कसरी इक्का
Schreiben (Write To) German Verb Conjugations
सिखहरूले कुन दिन पूजा गर्छन्?
सेल फोन पुन: रिसाइकिलिंग: तपाईंको पुरानो सेल फोन कसरी पुनःप्राप्त गर्ने
एन्जीको दुश्मनबाट बचाउन
1850 देखि 1860 सम्मको समय
एक लेख र एक निबंध बीच मतभेद
मरियम पढाइको जीवनी
रक्सीको इतिहास: एक टाइमलाइन
ब्लवीविया परिभाषा र उदाहरणहरू
ग्लास ट्रांसमिशन तापमान परिभाषा
के आइन्स्टीनले परमेश्वरलाई प्रस्ट पार्नुभयो?